ယေရုဆလင်မြို့ရှိ အသင်းတော်တို့၏ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း | Real Conversion
ယေရုဆလင်မြို့ရှိ အသင်းတော်တို့၏ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၇)
ရက်၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လိတ် မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားခြင်း။
“လမ်းမလမ်းကြားသို့သွား၍ တွေ့သမျှသောသူတို့ကို ပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြဟု အမိန်တော်ရှိသည့် အတိုင်း” (မဿဲ ၂၂း၉)။
ထို့အတွက်ကြောင့် ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပုံ ဥပမာ၌ဖော်ပြထားသည့် သကဲ့သို့အမှုတော်မြတ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် ခရစ်တော်ဘုရားက တပည့်တော်တို့အား မိန့်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “သခင်က မြို့ပြင်လမ်းမ ခြံနားသို့သွားဦးလော။ ငါ့အိမ်ကို ပြည့်စေခြင်းငှာ အနိုင်အထက်ခေါ်သွင်းလော့” (လုကာ ၁၄း၂၃)။ စားသောက်ပွဲကြီးသို့ ခေါ်ဖိတ်ခြင်းပုံ ဥပမာအတိုင်း အမှုတော်မြတ်၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ခရစ်တော်ဘုရားက တပည့်တော်တို့အား မိန့်ကြားခြင်းခဲ့ပြန်ပါသည်။ “တွေ့သမျှသော သူတို့ကို ပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြ” “အနိုင်အထက်ခေါ်သွင်းကြလော့” ထိုကဲ့သို့ အမိန့်ပေးခေါ်ဖိတ်ခြင်းပုံ ဥပမာများသည် ရှင်မဿဲ ၂၈း၁၉-၂၀၊ ရှင်မာကု ၁၆း၁၅၊ ရှင်လုကာ ၂၄း၄၇၊ ရှင်ယောဟန် ၂ဝး၂၁၊ တမန်တော် ၁း၈ နှင့် အခြားကျမ်း၌ ဖော်ပြသော သခင့်၏ မဟာစေခိုင်းချက်များကို မသွေမတိမ်း လုပ်ဆောင်ရန်ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။
“အနိုင်အထက်ခေါ်သွင်းလော့” ဟု ခရစ်တော်ဘုရား ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်ကြားခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်ကဲ့သို့ တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်ကြမည်နည်း၊ ၎င်း၏အဖြေသည် တမန်တော် ၂း၄၂၊ ၄၆-၄၇ ၌ တွေ့ရသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် ၎င်းကျမ်းပုဒ်ကို အသံကျယ်ကျယ် ဖတ်ကြားကြပါစို့။
“ထိုသူများသည် တမန်တော်တို့၏ ဆုံးမဩဝါဒကို ခံခြင်း၊ အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့ ခြင်း၊ ပဌာနပြုခြင်းတို့ကို အမြဲဆောင်ရွက်၍ နေကြ၏ (တမန်တော် ၂း၄၂)။
“ထိုသူတို့သည်လည်း ဗိမ္မာန်တော်၌ နေ့တိုင်းအစဉ်တညီ တညွတ်တည်းနေ၍ ကိုယ်အိမ်၌ မုန့်ကိုဖဲ့လျှက် ကြည်ဖြူရွှင်လမ်း ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် အစာအဟာရကို သုံးဆောင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်ကိုလည်း ချီးမွမ်း၍ လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ မျက်နှာပွင့်လမ်းခြင်းအခွင့်ကို ရကြ၏ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော သူတို့ကိုလည်း နေ့စဉ်မပြတ် သခင်ဘုရားသည် သင်းဝင်စေ တော်မူ၏ (တမန်တော် ၂း၄၆-၄၇)။
“ယေရုဆလင်မြို့အသင်းတော် တိုးပွားခြင်းသည် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကျယ်ပြန့် ဖို့ အလိုငှာ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများတို့အတွက် ပုံနမူနာကောင်းကျန်ရစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။” (John R. Rice, D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, Sword of the Lord Publisers, 1966, P. 25) တမန်တော် ၂း၄၂ က ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်အဖို့ ယေရုဆလင်မြို့အသင်းတော်တို့၏ ဝိညာဉ်သစ်များ သင်းဝင်စေသည့် ပုံနမူနာ (၄) ချပ်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
၁။	တမန်တော်တို့၏ ဆုံးမဩဝါဒဆိုသည်မှာ တမန်တော်ဝတ္ထု၌ မှတ်တမ်းတင်ထားသော တမန်တော်များတို့၏ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဆိုင်ရာ အဓိကအချက်များနှင့် တမန်တော်တို့၏ ခံယူချက်များကို ဆိုလိုပါသည်။
၂။	အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာ ဂရိတ်ဘာသာစကားအားဖြင့် ဒဒုသငညသညငဓေ မှလာပါသည်။ ၎င်းစကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အပေါင်းအဖော်များ အချင်းချင်း မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ လူမျိုးသားချင်းများ အချင်းချင်း မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါင်းဖော်သည်ဟု (W.E. Vine) က အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆို၏။ လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ခြင်းဟု (George Ricker Berry) က အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ မျှဝေခံစားခြင်း၊ သွေးသောက် ရဲဘော်ရဲဘက် စိတ်ထားဖြင့် ပေါင်းဖော်ခြင်း၊ ရိုင်းပင်းကူညီသော အပေါင်းဖော်ဖြစ်ခြင်း၊ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန် မိတ်ဆွေများတို့၏ ဒေသန္တရအသင်းတော်အတွင်း၌ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။
၃။	မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာ တမန်တော် ၂း၄၆၊ အရ သခင့်ညစာစားပွဲထက်သာလွန်သော အဓိပ္ပါယ်သက် ရောက်၏။ ၎င်း၏အနက်အဓိပ္ပါယ်သည် ကြည်ဖြူရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် အစာအဟာရကို သုံးဆောင် ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
၄။	ဆုတောင်းပဌာနပြုခြင်းဆိုသည်မှာ တမန်တော်များ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်ဆုတောင်းကြသည်ကို တမန်တော်ဝတ္ထု၌ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းအား သတိပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဆုတောင်းအားကြီးခြင်း မရှိခဲ့ပါက အသင်းတော်၌ သင်းဝင်သူလူသစ်များ အနည်းငယ်သာ သင်းဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအရေးကြီးသော အချက် (၄) ချက်အား ကျွနိုပ်တို့ အသင်းတော်များ၌ လက်တွေ့အသုံးပြုမည်ဆိုပါက တနေ့တခြား အသစ်ပြောင်းလဲသူများနှင့် ရေနှစ်ခြင်းခံရသူများကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်တော်ဘုရား လက်ဝါးကားတိုက်ပေါ် အပြစ်သားတို့အဖို့ အသေခံပေခြင်း၊ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်း၊ အသစ်သောသတ္တဝါဖြစ်လာခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကို တမန်တော်များဆက်တိုက် ဟောကြားသကဲ့သို့ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်များ၌လည်း ဝေငှဟောပြောဖို့ လိုအပ်ပေပြီ။
များသောအားဖြင့် အချို့သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော ကျမ်းပိုဒ် (တမန်တော်များ ဘယ်တော့မှ မသွန်သင်များ) ကို သွန်သင်ကြသည်။ သို့တည်းမဟုတ် “မိမိ၏ အယူအဆသဘောထား“ “မည်သို့မည်ပုံ” (တမန်တော်များဘယ်တော့မှ မသွန်သင်) များကို ရိုက်သွင်းကြသည်။ တမန်တော်များ၏ ဆုံးမဩဝါဒခံယူချက်များသည် ယနေ့အသင်းတော်များ၌ အမှန်တကယ်လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပေပြီ။ ကျွန်ုပ်ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဧဝံဂေလိအသင်းကောင်းကို အပတ်တိုင်း တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်း ဝတ်ပြုအစီအစဉ် ညနေပိုင်း အစီအစဉ်၌ ရိုးသွားခြင်းမရှိ၊ ပရိသတ်တို့၏ စိတ်ဝင်စားစားမှုကို လျော့မသွားစေဘဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဟောပြောဝေငှနိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဓမ္မသီချင်းဟောင်း၌ သီကုံးရေးသားသကဲ့သို့
ပြောရန်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရှိပေ၊ နာခံသောသူတို့အဖို့ကား၊ အဆာငတ်ပြေစေ၏၊ ငြိမ်သက်ခြင်း ချမ်းသာရှိစေ၏၊ ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တော်တွေ့ရ၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ရွှင်လမ်း၊ သီဆို၊ ဝတ္ထုဟောင်း တစ်ပုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အား ချစ်ကြောင်းကိုပြော၊ ပြောရန် ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရှိပေ၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ် ချီးမွမ်း သီဆိုဖို့ပြောရန် ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်က ယေရှုသခင်အာ ချစ်ကြောင်းကိုပြော၊ ပြောရန်၊
(ပြောပြရန် ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရှိပေ” ၁၈၃၄ -၁၉၁၁ အေ ကတ်သရိန်းအန်ကီ) ပြီးနောက် အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း ကို အလေးအနက်ထား ဂရုပြုရပါမည်။ ကျွန်တော်အလည်သွားသော အသင်းတော်တစ်ပါး၏ သင်းအုပ်ဆရာကြီးက အသင်းသားများကို ရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဘုရားကျောင်းအပြင်သို့ နှင်ထုတ်သည့် အဖြစ်အပျက် ကို တွေ့ရ၍ ကျွန်တော်နှစ်ရှည်ကြာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်။ ထိုသူသည် အသင်းသား^သူများကို ဘုရား ကျောင်းအပြင်ဘက်သို့ နှင်ထုတ်ခဲ့ပြီး ဘုရားကျောင်းကို သော့ခတ်ထားကာ တစ်ကိုယ်တည်းအထီးကျန်ဆန်စွာ နေထိုင်ပြုမူခဲ့သည်ကို တကယ်ကြုံတွေ့ဖူးပါသည်။
လူတစ်ယောက်က သူသည် ဆန်ဖေနာဒို မြစ်ဝှမ်းဒေသရှိ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော အသင်းတော်သို့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပတ်တိုင်း ဝတ်ပြုခဲ့ခြင်း၌ ပါဝင်ဖြစ်သည်ဟု ဟောပြခဲ့သည်။ အသင်းဝတ်ပြုခြင်း၌ ကျွန်ုပ်အား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆက်ဆံပြောဆိုသူ မရှိခဲ့၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမှ သူ့ဆီကို သွားရောက်ပြီးစကားပြောj ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ မှတ်မိရသလောက် လူတစ်ဦးကပဲ ကျွန်ုပ်အား နုတ်ဆက်စကားပြောဖူးသည်ကို ပြောပြခဲ့သည်။ တစ်နှစ်လုံးလုံး တစ်ယောက်ကပဲ စကားပြေခဲ့ဖူးသည်ကို ပြောပြခဲ့သည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ စကားပြောဆက်ဆံခဲ့ခြင်း မရှိသူသည် ယခုကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်၏ သင်းထောက်ဆရာ ဒေါက်တာခရစ္စတိုဖာအယ်လ်ကေကန် ဖြစ်သည်။
ဒေသန္တရအသင်းတော်များ၌ အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဝေငှရာ၌ ထိရောက်စွာ အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ ယေရုဆလင်ရှိ အသင်းတော်သည် “အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း ကို အစဉ်အမြဲ” ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (တမန် ၂း၄၂) ထိုအသင်းတော်သည် “မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းအခွင့်ကို ရရှိကြသည်ကို အံ့ဩစရာမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောသူတို့ကိုလည်း နေ့စဉ်မပြတ် သခင်ဘုရားသည် သင်းဝင်စေတော်မူသည်” ဟု (တမန် ၂း၄၇) ၌ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ယေရှုဘုရားက စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် အသင်းတော်အထဲ၌ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ခင်ကြပြီး ပျောက်ဆုံးနေသော ကမ္ဘာကြီးထဲ ထိုမေတ္တာကို ပြသကြရန် ယုံကြည်သူတို့အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“သင်တို့သည် အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ကို ချစ်သည်နည်းတူ အချင်းချင်း” ချစ်ကြလော့ဟု ပညစ်သစ်ကို ငါပေး၏။ သင်တို့သည် အချင်းချင်း ချစ်ကြလျှင် လူအပေါင်းတို့သည် ထိုမေတ္တာကို ထောက်၍ သင်တို့သည် ငါ၏ တပည့်ဖြစ်ကြသည်ကို သိရကြလိမ့်မည်ဟု မိန်တော့်မူ၏။ (ယောဟန် ၁၃း၃၄-၃၅)။
ထို့အတွက်ကြောင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခင်စွာ နေကြဖို့ရန် ယေရှုဘုရားက အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ငါပညတ်ဟူမူကား ငါသည်သင်တို့ကို ချစ်သည်နည်းတူ သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြလော့ (ယောဟန် ၁၅း၁၂)။ “
လောအိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ ကျွန်ုပ်၏ လက်ဦးသင်းအုပ်ဆရာက ထိုသခင့်အမိန့်တော်အပေါ် အကျယ်တစ်ဝန်း ရှင်းလင်းပြခဲ့၏။ ဒေါက်တာ တေမောသေ ပြောကြားသည်မှာ၊
တမန်တော်တို့အားဖြင့် အမိန့်တော်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ (ယော ၁၅း၁၂) ထိုသူတို့သည် အမိန့်တော်ကို နာခံလျှက် သစ္စာရှိစွာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြသည်။ အကျိုးကျေးဇူးအားဖြင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြငိ့် အသင်းတော်၌ ပါဝင်ခဲ့ကြ၏။ မယုံကြည်သူတို့အဖို့ မှတ်သားဖွယ် ချစ်ခင်ယုယခြင်း၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရိုသေလေးစားခြင်းဖြင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ “တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြလော့” ဟူသည် အမိန့်တော်ကို အသင်းတော်အတွင်း၌ အလိုအလျောက် သိရှိခံယူထားရမည် ဂါထာကဲ့သို့နေ့စဉ် ဖတ်ရွက်ရပါမည်။ သို့ပါသော်လည်း လေးနက်သော မေတ္တာတော်ကို သဘောမပေါက်ခဲ့ပါက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဂရုစိုက်ခြင်းရှိမည် မဟုတ်ပေ။ ၎င်းမေတ္တာရှိခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင် ထိုအသင်းတော်၌ တည်ရှိနေသည်ကို သိရှိနိုင်ပေမည်။ ထိုသို့ ပြုမူသူအပေါ်သို့ ဘုရားရှင်ကျောင်းကြီးသက်ရောက်ပေမည် ဖြစ်သည်။ (Thmothy Lin Ph.D. The secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of LosAngeles, 1992, P.33)
သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာလင်းက အမှုတော်ဆောင်ရွက်စဉ်တစ်လျှောက် ဒဒုသငညသညဓေ (မိတ်သဟာယ) တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ခြင်းကို အလေးပေးလုပ်ဆောင်ခဲပါသည်။ ထိုသို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်က အသင်းတော်၌ အသင်းသား တစ်ရာသာသာရှိသော အသင်းတော်သည် မကြာမီ အသင်းသား ၂၀၀၀ ကျော်လောက် တိုးပွားများပြားခဲ့သည်။
ကဲ့သို့ ယေရှုဆလင်မြို့အသင်းတော်၌လည်း အစားအစာများကို အတူအကွ စားသုံးခြင်းဖြင့် အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြငိးကို အစဉ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်များကို ရပ်တန့်ပစ်ပြီး အိမ်၌ ဖြစ်စေ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၌ဖြစ်စေ၊ စားသောက်ကြခြင်း မပြုခဲ့ကြပါ။ “ထိုသူများတို့သည် အစဉ်မပြတ် “အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့၍ ဝတ်ပြုခြင်းကို အစဉ်လုပ်ဆောင်ကြသည်ဟုသာ ဖော်ပြထားပါသည် (တမန် ၂း၄၂)။ “ကနဦးအသင်းတော်တို့၌ သခင့်ဘုရား၏ ညစာစားပွဲနှင့် ဆက်စပ်၍ တမန်တော်များလည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပို၍ရင်းနှီးမှုရှိစေဖို့ အတူအကွ အစာသုံးဆောင်ခြင်း မိတ်သဟာယကို အမြဲပြုကြခဲ့သည်။ (William MacDonald Believer's Bible Commentary Thomas Nelson Publishers 1995, P 1588 note on Acts 2:42).
လူများတို့သည်လည်း ထိုမေတ္တာကို ထောက်ရှုကြလျှက် ခရစ်တော်ဘုရား၌ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များ ဖြစ်လာကြပြီး အတူတကွပေါင်းဖော်ကြကာ အသင်းတော်အပေါ်၌ “သူတစ်ပါးအား ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ အချင်းချင်း ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းရန် ဆုံးမဩဝါဒ ပေးကြခဲ့ပါသည်။ (MacDonald, ibid).
အဆုံးသတ်အနေဖြင့် ပဌာနာပြုခြင်းကို အထူးဂရုစိုက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ “ပဌာန ပြုခြင်းကို အမြဲဆောင်ရွက်၍ နေကြ၏” ဟု (တမန် ၂း၄၂) ၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပင်တေကုတ္တေနေ့သည် တညီတညွတ်တည်း ကြိုးစား၍ဆုတောင်း ပငှာနာပြုခြင်းမှ စတင်ခဲ့ပါသည်။
“ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမှ စ၍ မိန်းမတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ညီတော်တို့ နှင့်လည်းကောင်း၊ တညီတညွတ်တည်း ကြိုးစား၍ဆုတောင်းပဌာနပြုလျှက် နေကြ၏” (တမန်တော် ၁း၁၄)။
“ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ ရောက်သောအခါ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် တညီတညွတ်တည်း စုဝေး၍ နေကြ၏။ (တမန် ၂း၁)
တမန်တော် ၁း၁၄ ၌ ဖော်ပြသော “တညီတညွတ်တည်း ကြိုးစာ၍ ဆုတောင်း” ကြသည်ဟူသော စကားလုံးကို မှတ်သားစေလိုပါသည်။ ဒေါက်တာတီမောသေလင်း ပြန်ဆိုရာတွင် “ အလားတူစိတ်အတိုင်းပဲ” ဟု ပြန်ဆိုသည်။ ယနေ့အသင်းတော်များများ ဝတ်ပြုခြင်းအထဲ၌ တညီတညွတ်တည်း ဆိုခြင်းကို စွန့်ပစ်ခဲ့ ကြသည်။ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် ဖြစ်ရပ်ကြုံတွေ့ရကြသည်။ မကြာခင်မှာပဲ အသင်းတော် ရာထောင်ချီတိုးပွားဖို့ အလျင်စလို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အတူတကွ ဆုတောင်းခြင်းကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြပြီ။ ယခုအခါတွင် များစွာစော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများသည် ရုပ်မြင်သံကြားကိုသာ ဝတ်ပြုကြပြီး အရှင်သခင်ကို မေ့လျော့နေကြပါပြီ တကယ်ကို ဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေပြီဖြစ်သည်။ (Timothy Lin, Ph.D Ibid, PP.94-95).
“ထိုသူများသည် တမန်တော်တို့၏ ဆုံးမဩဝါဒကို ခံခြင်း၊ အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့ ခြင်း၊ ပဌာနပြုခြင်းတို့ကို အမြဲဆောင်ရွက်၍ နေကြ၏။ (တမန် ၂း၄၂)။
“ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော သူတို့ကို နေ့စဉ်မပြတ် သခင်ဘုရားသည် သင်းဝင်စေတော်မူ၏ (တမန် ၂း၄၇)။
ထိုသူတို့၌ ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်လည်း မရှိသေးပါ။ ဏမသနြခအသမျ (မီးအလင်းထိုးစက်) မရှိသေးပါ။ ဝေစာလည်းမရှိ၊ ကျမ်းစာအုပ်ပင် မရှိခဲ့သေးပါ။ ဘာကြောင့်နည်း၊ မိတ္တူကူးစက်မရှိသေး၍ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အရာများမရှိသေးသော်လည်း ယေရှုဆလင်မြို့ရှိ အသင်းတော်သည် အသင်း^သူ ၅၀၀၀ ကျော် တိုးပွားခဲ့သည်။ ထိုမျှမကသေးပါ။ ထိုသူတို့သည် ဧဝံဂေလိ သတင်းတော်ဝေငှခဲ့ကြသည်။ အတူတကွ ပေါင်းဖော် မိတ်သဟာယ ပြုခဲ့ကြသည်။ အတူတကွ စားသောက်ခဲ့ကြသည်။ အတူတကွ ဆုတောင်းပဌာနပြုနေခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ အစဉ်အမြဲ ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ကောင်းကြီးသွန်းလောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဖိလစ်စကခ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
များပြားစွာသော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ (သို့မဟုတ်) ကနဦးအခေါ် တပည့်တော်များသည် များမကြာမီ ယုံကြည်သူပေါင်း ၅၀၀၀ အထိ တိုးပွားများပြားခဲ့ကြသည်။ ထိုယုံကြည်သူများ သည် တမန်တော်တို့၏ ဆိုဆုံးမစကားကို နာခံကြပြီး အတူတကွ ပေါင်းဖော်ခြင်းကို ပြုခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ သခင်ဘုရား၏ ညစာစားပွဲကို အမြဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အချင်းချင်းမိတ်သဟာယဖို့ အတူတကွ စားသောက်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ မိသားစုဝင်များ ဖြစ်ကြသည်ဟု အားလုံးသဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ အသီးသီး သော ခန္ဓကိုယ်သည် ဦးခေါင်းတစ်ခုတည်း၌ ဆက်ထားသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ခရစ်တော် ဦးခေါင်း၏ ကိုယ်အင်္ဂါရပ်များ ဖြစ်ကြသည်ကို နားလည်ခဲ့ကြပါသည်။ (Philp Schaff, Ph.D, History of the Christian Church, wm. B. Eerdmans. Publishing Company, 1975 reprint Volume 1, P. 247).
ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် ပြောကြားသကဲ့သို့ “ယေရှုဆလင်မြို့ အသင်းတော် တိုးပွားခြင်းသည် ကမ္ဘာနှင့် အဝှမ်း ဂေလိသတင်းကောင်း ကျယ်ပြန့်ဖို့အလို့ငှာ ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူတို့အတွက် ပုံနမူနာကောင်း ကျန်ရစ်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (Rice, Ibid)/
“လမ်းမ၊ လမ်းကြားသို့သွား၍ တွေ့သမျှသောသူတို့ကို ပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြဟု အမိန့်တော် ရှိသည့်အတိုင်း “ (မဿဲ ၂၂း၉)။
ရှေ့ဆက်ပြီး ဆုတောင်းပဌာနပြုကြပါစို့၊ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ လူကို ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့၊ ဒေသန္တရအသင်း တော်သို့ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းနာခံစေဖို့ လူသစ်များကို ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သူတစ်ပါး အား မေတ္တာပြချစ်ခင် ကြပါစို့၊ အထက်ပါဖော်ပြသမျှတို့အား အတူတကွဆုတောင်းခြင်း၌ ပေါင်းစည်းကြပါစို့၊ ကယ်တင်ခြင်း အလို့ငှာ တတူတကွ ပဌနာ ပြုကြပါစို့၊ ဒေါက်တာရိုက်စ်၏ သံစဉ်ချိုသီချင်း နားထောင်ကြရအောင်၊
သာဓု၊ သစ္စာရှိငယ်သားကောင်းဟု အပြုံးမျက်နှာဖြင့် ဆီးကြိုမည်
ယနေ့သည်ကား ရိပ်သိမ်းချိန် ကြိုးများလုပ်ဆောင်ရန်
ပျက်စီးမီးငရဲမှ သင့်အဆွေများအာ ကယ်တင်ပါ
ယနေ့သည် အပြစ်သားများကို ကယ်တင်ရန်ဖြစ်၏။
(အချိန်နီးပြီ၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် ၁၈၉၅-၁၉၈၀)
သင်သည် အပြစ်သားများဆီသို့ သွားရောက်ပြီး ခေါ်ဆောင်လာမှာလား၊ သင်ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မည် အကြောင်း ဆုတောင်းပေးပါ၏။ ကယ်တင်ရှင်၏ အမိန့်တော်ကို နာခံလျှက် အစဉ်တစိုက် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသူတို့အဖို့ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးသွန်းလောင်းပါစေသောင်၊
အခု၊ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းသင်တို့အား မဟောပြောရပဲ ဤဒေသနာတော်ကို အဆုံးမသတ်လို ပါ။ အပြစ်၏ အဖိုးအခကိုပေးဆပ်ဖို့ရန် ယေရှုသခင်ကို အဖဘုရားသခင်က စေလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်၏ အဖိုးအခအတွက် ယေရှုဘုရား အသေခံပေးဆပ်သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် အသေခံခဲ့ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အလောင်းတော်ကို ကျောက်ဂူထဲသဂြိုလ်ခဲ့ပြီး ကြီးမားသော ကျောက်ပြားဖြင့် တံဆိပ်ခပ်၍ ပိတ်ထားခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ ထိုကျောက်ပြားကြီးအား များစွာသော လူတို့က တွန့်လှိမ့်ပြီး သချိုင်း ကို ပိတ်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့ပေမယ့် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ယေရှုသည် ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုဘုရားသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွတော်မူပြီး အဖ ခမည်းတော်၏ လင်္ကာတော်	ဘက်သို့ ထိုင်လျှက် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ အခုဆိုရင် မိတ်ဆွေသင့်သည် မည်ကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ ဖြစ်လာမည်နည်း၊ သင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် နောင်တရလျှက် ယေရှုသခင်ထံ ချဉ်းကပ်တိုးဝင်လာရပါသည်။ ယေရှုဘုရားထံ မိတ်ဆွေတိုးဝင်ချဉ်းကပ် လာပါက သင်၏အပြစ်ကျူးလွန်သမျှ အားလုံးကို သခင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါ၊ ကိုးစားပါ၊ သခင့်ကျေးဇူးအားဖြင့် သင်အဖို့ကယ်တင်ခြင်း ရယူလိုက်ပါ။ အာမင်ဍ
- ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ဂရိတ်တန်အာရ်ချန်မှ ရှင်လုကာ ၉း ၁-၆ ကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
- တရားဒေသနာမတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၉၅-၁၅၈၀ ခုနှစ် ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးသော “အချိန်နီးကပ်ပြီ” ကို ကျူးဧပေးပါသည်။